I-Huawei Band 6, i-smartband ephelele kunazo zonke emakethe [Ukuhlaziywa] | Izindaba zamagajethi
UMiguel Hernandez | 30/05/2021 10:00 | General, Izibuyekezo
Amasongo ama-Smart kanye namawashi ahlakaniphile yimikhiqizo ekhona ngokwengeziwe empilweni yansuku zonke. Ngaphandle kokuthi ekuqaleni kwezizukulwane zalawa madivayisi bekubonakala sengathi abasebenzisi bebenqikaza ekusebenzeni kwabo nasemiklamweni yabo, iqiniso ukuthi imikhiqizo efana Huawei ukubheja kakhulu kufayela le- nokugqokekayo futhi imiphumela ibe mihle impela.
Sihlaziya ngokujula iHuawei Band 6 yakamuva, idivaysi enokuzimela okukhulu nezimpawu zemikhiqizo ye-premium. Thola nathi lokho obekuyisipiliyoni sethu ngeHuawei Band 6, amandla ayo futhi nobuthakathaka bayo.
1 Izinto zokwakha nokuklama: Ngaphandle kwesongo elilula
3 Isikrini esikhulu nokuzimela kwayo
Izinto zokwakha nokuklama: Ngaphandle kwesongo elilula
Ngenkathi iningi lemikhiqizo libheja namasongo amancane, ngemiklamo engabonakali futhi singasho ukuthi ngenhloso yokuyifihla, uHuawei wenze okuphambene neBand 6 yayo. Lesi songo sokulinganisa sisondele kakhulu ekubeni yi-smartwatch ngqo ngokwesikrini, ngosayizi nokwakhiwa kokugcina. Eqinisweni, ngokungangabazeki isikhumbuza ngomunye umkhiqizo wohlobo lomkhiqizo njengeHuawei Watch Fit. Kulokhu sinomkhiqizo omuhle, onenkinobho ngakwesokunene futhi onikezwa ngezinhlobo ezintathu zebhokisi: Igolide noMnyama.
Uyayithanda i-Huawei Band? Intengo izokumangaza kuzindawo zokuthengisa ezifana ne-Amazon.
Ubukhulu: X x 43 25,4 10,99 mm
Isisindo: I-18 amagremu
Amaphethelo ayindilinga kancane, phakathi kwezinye izinto ukuvumela ukuqina kwawo nokumelana kwawo. Vele, asizitholi izimbobo zezipikha noma imibhobho kule bracelet, azikho. Ngemuva kungezikhonkwane ezimbili zokushaja nezinzwa eziphethe i-SpO2 nokushaya kwenhliziyo. Isikrini sithatha ingxenye enkulu ngaphambili futhi ngokungangabazeki siyisiqhingi esiyinhloko sokwakhiwa, okwenza umkhiqizo usondele kakhulu ku-smartwatch. Ngokusobala umkhiqizo wupulasitiki webhokisi, uthanda ukukhanya kwawo, ngendlela efanayo imichilo eyenziwe ngayo nge-hypoallergenic silicone.
Kulokhu I-Huawei Band 6 Sizoba nezinzwa ezintathu eziyinhloko, i-accelerometer, i-gyroscope kanye ne-Huawei's optical rate rate sensor, i-TrueSeen 4.0 ezohlanganiswa ukuletha imiphumela ye-SpO2. Ngokwengxenye yayo, ukuxhumeka kuzoboshwa ngamaketanga ku-Bluetooth 5.0 okuyisisekelo sayo esinikeze umphumela omuhle ovela esandleni seHuawei P40 esiyisebenzisele izivivinyo.
Sinokumelana namanzi esingazi ukuvikelwa kwe-IP ikakhulukazi kanye nethuba lokukufaka kuze kufike ku-5 ATM. Ngokuqondene nebhethri, sine-180 mAh isiyonke ezokhokhiswa ngechweba lokushaja kazibuthe elifakiwe kuphakheji kungenjalo i-adaptha yamandla, ngakho-ke kufanele sisebenzise amanye amadivayisi esinawo ekhaya. Le Huawei Band 6 izosebenzisana namadivayisi we-iPhone kusuka ku-iOS 9 naku-Android kusuka enguqulweni yayo yesithupha. Asinayo i-wearOS njengoba kungalindelwa, sine-Operating System yethu yenkampani yase-Asia evame ukwenza kahle kakhulu kule misebenzi.
Isikrini esikhulu nokuzimela kwayo
Isikrini sizothatha konke okubonakalayo, futhi lokho la I-Huawei Band 6 faka iphaneli engu-1,47-intshi ezothatha ama-64% ngaphambili Ngokuphelele ngokusho kwedatha yezobuchwepheshe, yize ngokuthembekile, ngenxa yokwakheka kwayo okugobile kancane, umuzwa wethu ukuthi uhlala phambili nangaphezulu, ngakho-ke kubonakala kunomsebenzi wokuklama ophumelelayo ngemuva. Lokhu kuphikisana ngqo nokwakhe ubhuti omdala iHuawei Watch Fit, esikrini sayo singamasentimitha angu-1,64, futhi sakhiwe njengonxande. Asazi ukuthi isikrini sinaliphi izinga lokuvikela, yize ezivivinyweni zethu siziphathise okwengilazi emelana ngokwanele.
Iphaneli le-AMOLED linokuxazululwa kwamaphikseli angama-194 x 368sy inezinga eliphakeme lokukhanya kunamasongo ancintisanayo njenge-Xiaomi Mi Band eyaziwayo. Ngalesi sizathu, isikrini sibonakala kahle emini ebanzi, yize singenakho ukukhanya okuzenzakalelayo. Izinga lesithathu eliphakathi nendawo libukeka njengelona elizosebenza njengesikwele ukuze likwazi ukuliphatha kalula ngaphandle kokuphatha ngokuqhubekayo ukukhanya futhi ngaphandle kokulimaza kakhulu ibhethri.
Isikrini sinezinga lokuzwela kokuthinta eliphendule kahle ekuhlaziyweni, ukumelwa kwemibala nakho kuyathandeka, ikakhulukazi uma sicabanga ukuthi idizayini yenzelwe ukulengiswa esihlakaleni futhi ingathokozi ama-movie, ngisho imibala nokuqhathanisa kuthanda ukufundwa kolwazi i-Huawei Band 6 efuna ukusinikeza ngaso sonke isikhathi. Isikrini sibukeka sisihle ukusetshenziswa kwansuku zonke.
Ibhethri ngeke libe yinkinga, yize lawo ma-180 mAh engabonakala ngathi ambalwa, Iqiniso ukuthi ngokusetshenziswa kwansuku zonke esikunike lona, ​​iHuawei Band ikwazile sinikeze izinsuku eziyi-10 zokusebenzisa, lokho kunganwetshwa kuye ku-14 uma wenza amaqhinga athile okuthi ekugcineni asivikele ekuthokozeleni le divayisi.
Sinokulawulwa kokuthinta okuyisisekelo:
Phezulu: Isikhungo Sezaziso
Kwesobunxele noma kwesokudla: Amawijethi ahlukene nokusetha kabusha
Ngakho-ke sizokwazi ukuxhumana nedivayisi, ngaleyo ndlela silungise ukugqama, izinhlaka, imodi yasebusuku futhi sithinte imininingwane. Phakathi kwezicelo ezifakiwe sizoba nazo:
Inzwa ye-oxygen oxygen
Isitophuwashi, i-timer, i-alamu, i-flashlight, usesho nezilungiselelo
Ngokwethembeka, ngeke siphuthelwe noma yini kulesi songo, noma singeke sikwazi ukusinweba.
Asikwazi ukulindela imisebenzi eyengeziwe kuyo, sinesongo lokulinganisa elishaya izimbangi zalo ekwakhiweni nasesikrinini ngentengo yama-euro angama-59 lokhoNgokwethembeka, kungenza ngikhiphe wonke umncintiswano ngokuphelele. I-GPS ingahle ilahleke, ngiyicacisile, kepha akunakwenzeka ukunikela okuningi ngokuncane kakhulu. Imakethe ye-smartband "eshibhile" iguqulwe ngokuphelele yiHuawei Band.
Kuthunyelwe ku: May 30 we-2021
Isikrini esikhulu, sekhwalithi ephezulu
Ukuzimela okukhulu nentengo ephansi kakhulu
Ayikho i-GPS eyakhelwe ngaphakathi
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Izibuyekezo » I-Huawei Band 6, i-smartband ephelele kunazo zonke emakethe [Ukuhlaziywa]